Suuqa kala iibsiga ciyaartoyga waxyaalihii ugu waaweynaa bar bilow ilaayo maanta | ciyaaro24
Home Home	Suuqa kala iibsiga ciyaartoyga waxyaalihii ugu waaweynaa bar bilow ilaayo maanta
haddeynu ka bilowno kooxda real madrid waxay soo iibsatey Dani Ceballos oo kasoo wareegey kooxda Real Betis, Theo Hernandez oo isna kasoo wareegey kooxda Deportivo Iyo Fallejo Oo Amaah uu kujoogey kooxda Frankfort kaga soo noqdey iyo Llorrient oo isna amaah kaga soo noqdey kooxda deportivo alaves.
kooxda real madrid waxaa sidoo kale kabaxay Pepe Oo uwareegey kooxda Besiktas Halka James Rodriguez uu amaah ugu wareegey kooxda Bayern Munich, sidoo kale kooxda real madrid waxay iibisey alvaro morata oo ay ka iibisey kooxda chelsea iyo mariano diaz oo isna tegey kooxda Lyon, sidoo kale waxay iibisey Danilo oo tegey Man City iyo Fabio Controa oo tegey sporting lisbon.
haddiii aynu uwareegno kooxda Barcelona waxay ilaayo xattal aan soo iibsatey Nelson Semodo oo kayimid kooxda Benfica iyo gerard Deloufou oo amaah kaga soo ceshetey kooxda everton.
waxaase kategey kooxda barcelona Mathiou oo tegey kooxda Sporting Lisbon Iyo Christian Tello tegey kooxda real Betis.
Athlatico Madrid waxay soo iibsatey oo Vittolo oo kayimid kooxda Sevilla.
halka kooxda Sevila ay soo iibsatey Nolito oo kayimid Man City, Morriolo oo kayimid kooxda Sampdoria, Ever Beneca oo kasoo noqdey Inter Milan, iyo Simon kyer oo ay kasoo iibsadeen Kooxda Fenerbache, sidoo kale waxay tobabare umagacowdeen tobabarihii hore ee kooxda Celta Vigo Edaurdo Perizzu.
kooxda sevilla waxaa kategey Adel Ramy oo uwareegey kooxda marseille iyo Eborra oo kooxda Leicestery Iibsatey iyo Mariano oo isna tegey kooxda Galatasarey.
kooxda Man City waxay sii deesey dersin ciyaartoy oo kala ah (zabaletta – Clichy – Sagna – Nolito – Joa Hart) waxay soo iibsatey goolhayihii kooxda Benfica Ederson, Danilo, Kyel Walker, Mendy iyo bernardo silva.
arsenal waxay bilaash kula soo wareegey saed klosinak iyo alexander lacazatte oo ay kasoo iibsatey kooxda lyon waxayna iibisey goolhayaheedi sczezny .
kooxda chelsea waxay soo iibsatey antonio rodiger – bakayoko – alvaro morata waxayna iibisey.
halka kooxda man united ay soo iibsatey victor lindelof, Matic Lukaku.
kooxda liverpool waxay soo iibsatey mohamed salah, andre robertson oo kayimid kooxda hull city waxayna iibisey lukas leiva oo tegey kooxda Lazio.
kooxda Ac Milan oo suuqa kala iibsiga ciyaartoyga kaqaadatey qayb libaaxa ayaa waxay soo iibsatey (Rodriguez – Musacchio – Andre Conte – Keissi – lukas biglia – hakan calhanoglu – andre silva iyo borini )
kooxda Napoli waxay soo iibsatey ciyaartoyga khadka dhexe uga ciyaara xulka algeria adam ounas
kooxda PSG waxay si xor ah ula soo wareegtey dani alves iyo Yuri oo kayimid kooxda Real Soceidad waxaana kategey agustin.
kooxda Monaco waxay iibisey bernardo silva bakayoko mendy waxayna lasoo wareegtey tilmonas oo kayimid kooxda anderlecht.
kooxda bayern munich waxay iibsatey sergi genabry dabeeto waxay amaah ku geysey kooxda hoffeinham waxayna soo iibsatey james rodriguez, tollisu iyo labada ciyaartoy Niklas Sule Iyo Sebastian Rudy oo labadoodaba ay kasoo iibsatey kooxda Hoffeinham
Suuqa kala iibsiga ciyaartoyga waxyaalihii ugu waaweynaa bar bilow ilaayo maanta was last modified: July 31st, 2017 by admin
Ac Milanadam ounasArsenalBayern Munichbernardo silvaBesiktasChelseachristian telloDani CeballosfallejofrankfurtJames RodriguezjesusJuventusLiverpoolllorrientman cityMan UnitedmendynapolinavaspepeReal BetisReal Madridsevillatheo hernandezwalkerzabaleta
MAQAALO LAMID AH
Lucas Lima Oo Qirey Inuu uwareegey Kooxda Barcelona
Kooxda Barcelona Maxay ubaahantahay haddii ay rabto iney kusoo noqoto awoodii hore loogu yaqaaney?!
Ac Milan Oo Durbaba Keentey Dunnorumma Bedelkiisii
Daawo: Germany Oo Saddex Gool Iyo laba Udhiibey Xulka Australia
salvatore sirigu oo si rasmi ah ugu biirey kooxda Torino
Real Madrid Oo 61 Ciyaarood Oo Isku Xiga aan garoonka kala bixin gool la’aan
arsenal oo sheegtey lacagta ay ku iibineyso alexis sanchez
Daawo: Burnely 3-2 Chelsea
Cristiano Ronaldo Oo markii ugu horreysey kusoo laabtey tobabarka kooxda real madrid
Arsenal Oo Kutumatey Stoke City